3D kuratidza stand Manufacturers - China 3D kuratidza stand Suppliers & Factory
Tower banner inverted piramidhi chimiro chine 3 mativi ekuratidzira.Iyo yakareba uye yakasarudzika chimiro ichaita kuti iwe umire kunze kwekuratidzira kana zviitiko.3 dhizaini dzakasiyana kana zvese zvakafanana zvinogoneka zvichienderana nezvaunoda.
Iyo tornado banner inotumidzwa zita rechimiro chayo, 3D cylinder kuratidza banner.Kusiyana neBurgundy banner kana lantern banner, tornado banner inoratidzira isina kukanganiswa.Inogona kutenderera mumhepo.Indoor kana Outdoor shandisa sekuratidzira, trade show, shopping mall etc.
Toblerone banner inotumidzwa zita rechokoreti sezvo iine chimiro chakafanana.Nemabhana matatu akatwasuka akasanganiswa, unogona kuva nenzvimbo yakakura inodhinda.Iyo zvakare inogona kushandiswa seyakachinjika banner.Iwe unogona kushandisa muzviitiko zvakasiyana kana zvichidikanwa, izvo zvinogona kuchengetedza mutengo wako nenguva.Ose maumbirwo ari nyore kushandura magirafu.
Piramidhi banner, ndeye 4 Sided portalble banner inomira, sarudzo yakanaka yekuti iwe umise chiratidziro chako nekukurumidza pane zviitiko.Iine chimiro chitsva uye akawanda anotungamira maitiro, anoita kuti iwe umire kunze.Inovhurika seamburera.Zviri nyore kuseta uye kutora pasi.Iwe unogona kungochinja magiraidhi nyore kana meseji yako yachinja.Yekutanga dhizaini yewzrods.
Pop up vertical banner is A-Frame Structure.Zviri nyore kushandisa, kupeta, kuchengeta uye kutakura.Imwe pop up banner modhi inoenderana nezvaunoda.Inoshandiswa zvakanyanya mumitambo yegorofu, mitambo yezhizha, magadheni, maturu uye zviitiko zvemahombekombe uye mamwe mabasa.Kuve yakagadzirirwa kunze, inopikisa, yakachengeteka, inotakurika uye yakakodzera kuratidzwa kwekushambadzira.
Mabhenji ebhinzi, ane zita reovhari, anozivikanwawo sePop Up A-Frame Mabhena , Kunze Pop Out Banners kanaSideline Banners, inobata ziso inotakurika, yakareruka uye iri nyore kushambadzira bhena chiratidzo chinogona kumisikidzwa nekudzikiswa mukati memasekonzi makumi matatu.Kaviri-mativi mifananidzo inopa yakanyanya kuratidzwa.Yakanakira zviitiko zvemitambo, kukwidziridzwa, kutengeserana show, uye inotungamira signage.
Flame banner, inozivikanwawo seLantern Banners, inova ine hunyanzvi hwekumaka mukati nekunze kwekuratidzira mhinduro, inodhinda pamativi matatu, yakawanda nzvimbo yekutumira meseji kupfuura mireza yechinyakare, kutenderera kunofamba kunogadzira 360 ° maonero mumhepo, meseji yako inogona kuoneka kubva chero kwainoenda.Zviri nyore kuunganidza uye zvakanyanya kuoneka.
Half moon banner ine huremu uye inotakurika, inogona kushandiswa mukati kana kunze, yakafanana nePop out mabhana kana Sideline A-frame mabhana, yakanaka sarudzo yekuti iwe uise chiratidziro chako nekukurumidza pazviitiko.Inogona kumisikidzwa nyore mukati memaminitsi uye yakarongedzwa mudiki saizi.Iwe unogona kungochinja magirafu kana meseji yako yachinja.inogona kushandiswa seimwe chete kana mbiri mativi kuratidza.